'गे'को घरमा एकरात,(बासु श्रेष्ठ)
सन् १९९६ डिसेम्बरको शायद अन्त्यतिर हुनुपर्छ दिनभरी हिउँ परेको थियो । म त्यतिबेला रेष्टुराँमा कूकको काम गर्थेँ । ग्रीनकार्डकोलागी । सँगै काम गर्ने रबर्ट नामको एकजना वेटरपनि मसँगै राती रेष्टुराँ बन्द गर्नेमा थियो र उ कसरी घर जाने भन्ने समस्या तेर्सिएको थियो । <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
रबर्ट हँसिलो, फरासिलो र होचो होचो कदको थियो । उमेर यस्तै ४५-४६ हुँदो हो । तर उ समलिँगी थियो । अर्थात 'गे' । तर यसमा उ कुनै सँकोच मान्दैन थियो । हाकाहाकी 'आई एम गे' भन्दै परिस्थिति अनुसार हावभाव सहित निर्धक्क भन्ने गर्थ्यो । अझ मसँग कूक भएको नाताले बढि नजिकिएको थियो । मलाई 'बाबा' भनेर बोलाउँथ्यो । किनभने रेष्टुराँको नियम विपरित खाना बनाएर खान दिन्थेँ । यसरी खाना पाउनेहरुमा रबर्ट एक्लो थिएन । ईथियोपियन, ईरित्रियन, अमेरिकन, मोरक्कन तथा ईण्डियन वेटरहरुपनि थिए भने डिसवासरको रुपमा मँगोलियाबाट डाक्टर बनेका व्यक्तिसमेत थिए । रेष्टुराँमा काम गर्नेहरुले खाना सित्तैमा पाउनुपर्ने भन्ने मेरो मान्यताको विपरित थियो रेष्टुराँको नियम । त्यसमाथि निम्नतम ज्यालामा काम गर्ने ति वेटरहरुले खानामै पैसा खर्च गरेभने उनिहरुको आम्दानी के भयो त भन्ने मेरो तर्क रहेकोले लुकिलुकि ति सबै कामदारहरुलाई म खाना खान दिन्थेँ ।
मसँग रबर्ट यति खुल्लम खुल्ला थियो कि अघिल्लो दिन कहाँ कोसँग, के गर्यो, कति पैसा कमायो यावत कुराहरु भन्थ्यो । अर्को अर्थमा उ एकप्रकारको रण्डोपनि थियो । यदाकदा कोहिसँग यौनजन्य क्रियाकलाप गरेर पैसा कमाउने उसको बाटो भएपनि यो नियमित भने थिएन । किनभने उसको आफ्नै पार्टनर माईक थियो । जो रबर्टकोलागी केटाको भूमिका निर्वाह गर्थ्यो ।
मेरो कामको शिफ्टमा रबर्टको शिफ्ट पर्यो भने साह्रै दँग पर्थ्यो । किनभने खाना खान पाउने भयो । मौका हेरेर पेट मुसार्दै 'बाबा, आई एम हँग्री' भनेपछि 'के खान्छस्' भन्ने मेरो प्रश्न तेर्सिहाल्छ भन्ने उसलाई थाहा थियो । बेला मौकामा ग्राहकले छोडेका खानाहरु भित्र आएर खाएको देखेर मैले हकारेको थिएँ पनि । र मेरो शिफ्टमा त्यसरी खान छाडेकोपनि थियो ।
मसँग अन्य कामदारहरु रबर्टजस्तै मिलनसार भएपनि मलाई आज किन हो उसको बढि सँझना आईरहेको छ । शायद उसको खुलापन, मिलनसार र उन्मुक्त हाँसोको कारण हो कि ?
जे होस त्यसदिन रबर्टलाई घर जान समस्या परेको थियो । अरुले राईड दिन मानेनन् । बाँकि रहेको मैले 'नाई' भन्न सकिनँ । तर फर्किने समस्या थियो । त्योपनि उसैले समाधान निकाल्यो । उसैको पार्टनरको घरमा बस्ने । मैले 'हुन्छ' भनेँ ।
उसको घर पुग्दा रातको झण्डै एघार बजिसकेको थियो । कारणवश उसको पार्टनर आईपुगेको रहेनछ । उसले मेरोलागी कोठा देखायो । घरभित्र पस्नेबित्तिकै मेरो मन ढक्क फुलेर आयो । एक त 'गे'को घरमा पुगेको छुँ । त्यसमाथि लिभिँग रुमदेखि बेडरुमहरुमा सजाईएका विभिन्न अनौठा वस्तुहरु देखेर आँग जिरिँग भएको थियो । तर मैले कुनै प्रतिक्रिया जाहेर गर्न चाहिनँ । किनभने रबर्ट काममा मबाट 'डोमिनेट' थियो । म उसको अगाडि काँतर देखिन चाहन्नथेँ । तर मनमा भने एकप्रकारको अशान्ति, उहापोह र हलचल भने मजैले उब्जिएको थियो ।
मलाई आफ्नो कोठा देखाएर उ आफ्नो कोठामा गयो । म ओछ्यानमा ओढ्नेभित्र गुँडुल्किएँ । तर निदाउन भने सकिनँ । भित्तातर्फ ढाड फर्काएर सुत्ने प्रयत्न गरेँ । निकै अबेरसम्म निदाउन सकिनँ । म 'छक्का'को घरमा छुँ, कतै यिनिहरुले मसँग जबर्जस्ती गरेभने मैले आफ्नो बचाव कसरी गर्ने आदि अदि तरँगहरु मनमा आईरहे । अर्कोतर्फ निदाउने प्रयत्न जारी थियो । कसैगरी आँखा लागीहालेपनि बिँउझिएर हत्त न पत्त भित्ता तर्फ ढाड फर्काई हाल्थेँ र फेरि निदाउने प्रयत्न गर्थेँ ।
'बित्थामा यो मोरोलाई राइड दिएछुँ' भन्ने पश्चातापपनि भईरहेको थियो । यसबेला आफ्नै घर जाउँभने पनि बाटो खराब छ । 'हत्तेरी' भन्ने जस्ता अनेक कुराहरु मनमा खेलिरहे । कहिलेकाहिँ 'यि गेहरु आफ्नो पार्टनरप्रति ईमान्दार हुन्छन्' भन्ने सुनेको भनाईले निदाउन मद्धतपनि गर्थ्यो । तर फेरि 'क्या हो, क्या हो' भन्ने आशँका र त्रासले बिउँझाई हाल्थ्यो र फेरि ढाड भित्तातर्फ फर्काउँथे ।
रात काट्न साह्रै मुश्किल पर्यो । कतिबेला बिहान होला र यहाँबाट टाप कसुँ जस्तो भईरहेको मनले घडिको घण्टा गन्न थालेको थियो ।
बल्ल रातको दुई बजे छ । तर धन्न रबर्ट र उसको पार्टनर आफ्नै कोठामा छन् । केहि गरि दुबै मेरो कॊठामा आएभने ? भन्ने तर्कले 'के गर्ने होला?' भन्ने लाग्थ्यो ।
हत्तेरी, बल्ल चार बजेको रहेछ । यसबिच आँखाले केहि झिमिक्कमात्र गर्न पाएको रहेछ । पाँच-छ बज्नेबित्तिकै टाप कस्नुपर्छ भन्ने मनमनै निर्णय गरेको छुँ । तर समय चाहिने बेलामा साह्रै ढिलो हिँड्दो रहेछ । जुनबेला एकछिन अडि दिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुन्छ त्यतिखेर भने झिमिक्क दौडिहालेको हुन्छ । तर आज 'किन छ बज्दैन?' भन्ने प्रश्न बारम्बार आईरह्यो । बाहिर सारा सँसार सेताम्मे छ । सडकको बत्तिमा हिउँले सम्पुर्ण छोपेको हुनाले मात्र सेतो तर उज्यालो र चहकिलो देखिन्थ्यो तर चकमन्न ।
बल्ल चराको चिरविरले बिहानको झलक दिन थाल्यो । घडिले साँढेपाँच बजाएको रहेछ । तन्द्रै तन्द्रामा, अर्द्ध निद्रामा घडिमा देखिएको समयले अलिकता सास आएको अनुभव गरेँ । अब त सँकटकाल टर्यो भन्ने ठान्दै बिस्तारै ओछ्यान छोडेर गाडिको साँचो लिएर टाप कसेँ र आफ्नो एपार्टमेण्टमा पुगेपछि मस्तसँग निदाएँ दिनभर ।
akdmai ramro lagyo
एकदम मज्जाको लाग्यो संस्मरण !!!